Konke NgeePlastiki ze-Welding kunye neCanoes
Ukuzilibazisa kunye Nemisebenzi Paddling
Akukho mbuzo malunga nalo, ukufika kweplastiki kuye kwatshintsha umdlalo we kayak ngonaphakade. Le nto yezinto ezizibuzayo zihlala zizinzileyo, ziguquguqukayo kwaye zingabizi. Iimpawu ezenza iplastiki epheleleyo yokwenza i-kayaks ziphuma zizinto ezifanayo ezikwenza kube nzima kakhulu ukulungisa. Nangona ukulungiswa kwee-plastic kayaks kungabi lula, ngokuqinisekileyo akunakwenzeka. Nantsi isikhokelo sokujonga indlela yokulungisa kunye ne-plastic weld yakho kayak.
Ngaba i-Kayaks yePlastiki iyakwazi ukulungiswa?
Abaninzi bee-kayaking abafuni ukubandakanyeka nokulungisa ii-kayaks zeplastiki. Bavame ukucebisa abathengi babo ukuba ukulungiswa kwee-kayaks zeplastiki akufanelekanga okanye akuyi kusebenza kwaye kusenokuba ixesha lokuthenga i-kayak entsha. Kakade bayaxhalaba malunga nokuxanduva. Kwakhona inkqubo ekhohlakeleyo engapheliyo ekhangeleka njengento entsha kwaye ayifuni ukujongana nayo. Kwaye, kunjalo, basemashishini athengisa izikebhe, bangazilungisi.
Nangona kubekho ixesha lokuthatha umhlalaphantsi kwi-kayak, kufuneka uqhubeke ukwazi izinto ozikhethayo. Eli nqaku liyakunceda uqonde ukuba kutheni kunzima ukulungisa iplastiki kwaye kukunike iingcamango malunga nokuqhubeka nokulungisa i-kayak yakho yeplastiki. Kaninzi "
Izindlela ezahlukeneyo zokulungisa i-Plastic yakho ye-Kayak
Akukho monakalo kwi-kayak yakho yeplastiki elinganayo. Indawo, ubukhulu, kunye nohlobo lwengxuma, ukuqala, i-gouge, okanye i-crack yiyo yonke into edlala ngayo ekufuneka ulungise i-kayak yakho. Esi sikhokelo siza kukunceda uhlole umonakalo wakho kwaye sikunike iingcebiso malunga nendlela yokuqhubeka. Kaninzi "
Qinisekisa ukuba i-Kayak yakho yePlastiki ingafakwa
Izinto zokwesekwa kwePlastiki. © George E. Sayour
Emva kokuba ufumanisa ukuba ukunyuka kweplastiki kuyilungiselelo elifunekayo lokuqhekeka kwi-kayak yakho, kuya kufuneka uqinisekise ukuba i-kayak yakho ingasuswa njani. I-plastic kayaks zenziwe nge-polyethylene. Nangona kunjalo, akuyiyo yonke i-polyethylene ekulungiswayo. Umgangatho ophezulu we-Polyarlylene (i-HDPE) ingaba yiplastiki edibeneyo. I-Polyethylene ePhambeneyo (XLPE) ayikwazi. I-Lucky yama-kayak kakhulu i-kayaks namhlanje iyenziwa nge-HDPE, kodwa usadinga ukuqinisekisa. Nantsi indlela yokwazi ukuba i-kayak yakho yenziwe nge-HDPE kwaye ingaba yiplastiki edibeneyo.
Ligher, Screwdriver, kunye nePlastiki Scrap ukuzalisa i-Plastic Welding eKayak. © George E. Sayour
Uninzi lweengcali ziza kuthi ufuna i-plasder welder kunye ne-plastic welding rod ukuze ulungise i-kayak yakho. Nangona kunjalo, ukuba awufuni ukutyalomali kule sixhobo ezikhethekileyo kunye nempahla, usenokhetho. Isiseko sokwelusa iiplastiki kukushisa kunye neeplastiki kwaye zombini zifumaneka lula ekhaya lakho. Nalu uluhlu lwezinto oza kulufuna ukuba upake iplastiki yakho ye-kayak kwisabelomali. Kaninzi "
Indlela yokwenza iPlastiki ifake iKayak yakho
Indawo esicatyelelwe eyenzelwe ukukhutshwa kweeyayak. Ifoto © nguGeorge E. Sayour
Xa uyazi ukuba unokwenza iplastiki idibanise i-kayak kwaye uqokelele izinto eziyimfuneko, ulungele ukubeka ubushushu kwiiplastiki uze uzalise loo nto. Akungabazeki ukuba isisombululo esisongelayo sabanikazi bamaKayak. Nantsi isikhokelo malunga nendlela yokwenza iplastiki ifake i-kayak kunye nezinto eziqhelekileyo unayo malunga nendlu. Kaninzi "
UkuPhathwa kweeKayaking Gear
I-kayaking gear ayiyibizi. Sivame ukuthanda izixhobo esisisebenzisayo. Zombini zizathu zokugcina kakuhle ii kayaks kunye nezixhobo esisisebenzisayo xa siphezu kwamanzi. I-Kayaks ngokwemvelo zihlakulela izikratshi, iiglavu kunye ne-wetsuits zakha imingxuma, kwaye iplastiki kunye neerubha inokuma. Yonke into yendalo. Kodwa akukho nanye kuzo izizathu zokuphonsa impahla ngaphandle kokuba ibanjwe ngokukhawuleza. Nolu uluhlu lwezinto zokulungisa zonke i-kayaker kufuneka zibe nazo ukulungiswa nokulondoloza ubomi bee kayaks kunye nejeyari.
Iintlobo ezahlukeneyo zeCanoes
Ithemba, IQela kunye neNkokeli yeCanoe Games
Yintoni i-SUP (Standup Paddleboarding)?
O Lindani! Le Paddleboard yiKayak
Indlela yokwenza iCanoe J-Stroke
Ndingahlala phi iCanoe?
Indlela yokuzibandakanya kwiimeko ezinobunzima beeKayaking zoLwandle
Indlela Yokugcina I-Plastic Yakho Yeplastiki
Imbali eboniswayo yeCanoe kunye neKayaks
Ngaba ikhuselekile kwiCanoe kunye nomntwana wakho?
Iimvavanyo ezi-10 malunga nezintandokazi zabalobi bezingane kunye neefayili
II-Verbs - I-French Language Text Change Verbs
Amaqiniso kunye nolwazi malunga noBomi boLwandle
Imiyalezo yokuzalwa yamahlazo
Indlela yokufaka iRuby kwiLinux
Inkcenkcesho yokuSungula kwe-1832: I-Precursor to War Civil
Ngaba uMark Zuckerberg ungumDemocratic okanye iRiphabliki?
Phezulu 'Ii-80 zeengoma Ngomsebenzi
I-Admissions yeekholeji yase Skidmore
I-Iceman yama-Alps ase-Italy
Iyintoni intsingiselo yeSikhism Ixesha lePaath?
Umzuzu weeFomula ze-Inertia
Imfazwe Yehlabathi II: I-Gloster Meteor
I-Law Law Admissions Calculators kunye ne-Predictors